ရယ်ရယုံ (၃၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရယ်ရယုံ (၃၃)
Posted by etone on Aug 14, 2010 in Aha! Jokes, Satire |0comments
– ဒါဖြင့် အိတ်ကိုပဲ ဘူတာပို့ပေးပါကွာ ငါလမ်းလျှောက် လိုက်ခံမယ်။
– ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်သွားရင် မြေပြင်ကိုတွေ့နိုင်မလဲ။
– ဘယ်လမ်းက သွားရမှာလဲ။
– အောက်တည့်တည့် ဆင်းသွားရမှာ။
ငရဲမင်းကြီး က သေလူသုံးယောက်အားသေဆုံးခြင်းအြေ
ပထမလူ။ ကျွန်တော့် မိန်းမဖောက်ပြန်တာကိုအလုပ်ကအပြန်မှာတွေပြီး မိန်းမနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ သူကို ရေခဲသေတ္တာ နဲ့ ပစ်ပေါက်ပြီး ကျွန်တော် ကိုယ်ဘာသာ သတ်သေလာတာပါ…
ဒုတိယလူ။ ကျွန်တော် က ကျွန်တော့် အိမ်ရှေ့ ၀ရန်တာမှာ အရမ်း အိုက်လို့ အကျီင်္တွေ ချွတ်ပြီး အအေးခဲနေတုံး အပေါ်က ရေခဲသေတ္တာပြုတ်ကျတာ ပိပြီး သေလာတာပါ….
တတိယလူ ။ ။ အော်သေမှလား ကျွန်တော်ကအခုချက်ချင်းသွားဖို့လူစုနေတာမှတ်လို့..ဟီး
ကောင်မလေးပြန်ပြောလိုက်သည်မှာ “မောင် နမ်းချင် သွားနမ်းလေ ချစ် ဒီကစောင့်နေမယ်” ဟုသတည်း။
အမျိုးသမီးလည်း သေနတ်ယူကာအခန်းတွင်းသို့ဝင်လေသည်။ ထိုနောက် သေနတ်ပစ်ခတ်သံများတချက်ပြီးတချက်ကြားရလေသည်။ ၎င်းနောက် အော်ဟစ်သံများ၊ ကွဲရှသံများနှင့် နံရံကိုထုနှက်သံများကိုကြားရလေသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်တိတ်ဆိတ်သွားပြီး တံခါးကိုဖြေးညှင်းစွာပွင့်သွားပြီးအမျိုးသမီးထွက်လာလေသည်။
ဆရာ ။ ။ မင်းကဘာလို့ကျောင်းအမြဲနောက်ကျရတာလဲ
ကျောင်းသား ။ ။ ဆရာကကျွန်တော်မရောက်ခင်ခေါင်းလောင်းအမြဲတမ်းတီးတာကိုး
လူတစ်ယောက်က သူ့ သူငယ်ချင်းကိုဆေးခန်းလိုက်ပို့ ပြီး ဆေးခန်းမှဆရာဝန်ကို…
“သူ့ ယောက္ခမကြီးကို ကျွန်တော့်မိကျောင်းကန်ထဲတွန်းချတယ်ဆရာ”
ပယမလူ၊ ၊ ဟေ့ မင်း မိန်းမ မယူသေးဘူးလာ
ဒုတိယလူ၊ ။ အဲဒါ ခက်တာပေါ့၊ ငါတက်နေမယ့် ယောက္ခမတွေတောင် သူတို့ရဲ့ယောက္ခအိမ်မှခုထိကပ်နေကြတုန်းကွ